Umxokozelo Robin DR400 FSX & P3D - Rikoooo
Robin DR400 FSX & P3D Inguqulo 2
Play 22 831
Zadalwa 26-03-2015 18: 32: 29
Kushintshwe 21-10-2017 01: 05: 56
Umbhali: U-Yannick Lavigne-Fred Banting-Rob Young, FSX & P3D ifomethi yomdabu nge-Bluebear
I-21 / 10 / 2017: I-2 inguqulo manje ehambisanayo ne-P3Dv4, ivuselelwe kabusha i-repaint entsha, i-dynamic dynamics yokuziphatha (ukuziphatha okungcono kwe-trim)
futhi iphaneli ebuyekeziwe kanye nezinto ezincane.
I-18 / 04 / 2017: Ibuyekezwe kumshini wokufaka i-10.2. Manje i-100% yomdabu we-FSX. Ukulungiswa kwenkambiso ye-8 eyengeziwe. Imisindo entsha yenkambiso. I-cockpit yokusebenza esebenzayo ne-Prepar3D. Imiphumela emisha.
Ikhwalithi ephezulu Robin DR400 HD abanikeze asebenza nabo virtual 2D iphaneli, kuhlanganisa 8 repaints, ngokwezifiso umsindo, 100% izibuyekezo lwendabuko FSX futhi P3D.
Robin DR400 eyodwa-engine wendiza encane ezisetshenziswa kakhulu amakilabhu ezindizayo, kukhiqizwa yinkampani Avions Pierre Robin, manje ebizwa ngokuthi Robin Aircraft.
Yavela 1972 ngokushintsha uhla DR300 (DR are initials kaJean Délémontez kanye Pierre Robin). Uma kuqhathaniswa lezi, umehluko omkhulu bangamathe EThemini yesi gumbi ihlombe nophahla ingilazi ukuthi umba kancane uye phambili esikhundleni iminyango, umqondo omusha kuqala isicelo kwi-HR-1 in 1969. I camber iphiko kwenza kube eziqondisa lula kanye Itafula kangcono. I dashboard uphakeme futhi sicace ngokwengeziwe.
Sithola nokuthi amaphi amandla kutholakale mayelana models ezahlukene esukela injini ikakhulukazi, endlwaneni eyakhiwe nsé. tinkhulumo Less ezinamandla, kuze kufinyelele 120 hp, zibizwa ngokuthi "2 + 2", okungukuthi, ngoba abadala ababili nezingane ezimbili (noma abadala abathathu), abanye bonke quadriplaces the 180hp ukuthatha ngaphandle kwezinkinga 4 abagibeli, refueling futhi abanye imithwalo.
Luhlakasimo indiza ubudala, kuba ephansi wing entoilée izinkuni isakhiwo wing dihedral tip. Iphiko ongaphakeme ivumela for ukubonakala omuhle. Kuyinto uhlobo Jodel, isici kakhulu. It has a gear amathathu kokwehla, kulula ukufaka kuka isitimela ezivamile.
Kuyinto okwamanje namanje elusizo impela iningi French ezindizayo amakilabhu (ama 50% of the French Aerospace park ezindizayo club), nokuningi kabanzi eYurophu. Yona futhi le ndiza enedumela elihle kokubili esikoleni futhi izimoto. (Wikipedia)
Robin DR400 FSX & P3D Inguqulo 2 Thwebula
Incazelo 13 090
Incazelo 52 516
Incazelo 16 366
Incazelo 21 276
Incazelo 12 120
Incazelo 11 280
Incazelo 26 949
Incazelo 14 073
Incazelo 14 829